Facebook Messenger ရဲ့ Chat Head ကို အခြား Messenger များမှာ ဘယ်လို သုံးမလဲ? – DigitalTimes.com.mm
Google Hangouts , WhatsApp, Skype တို့ အပါအ၀င် Messenger များထံ Message များ ၀င်လာတဲ့ အခါမှာ အဲဒီ Messenger ကိုဖွင့်ပြီးမှ စာပြန်ရတာ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ Facebook Messenger ရဲ့ Chat Head ကတော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ App ကို ပိတ်စရာ မလိုဘဲ စာပြန်နိုင်တဲ့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ quickReply အမည်ရ App က Messenger များကို ဖွင့်စရာမလိုဘဲ စာပြန်နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ quickReply က နာမည်ကြီး Messenger များအပါအ၀င် Line, Kik, Textra, Telegram စတဲ့ နာမည်သိပ်မကြီးတဲ့ Messenger များကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ သူက Messenger Chathead လို Pop-Up Window ကနေ စာပြန်နိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သလို Notification Bar ကနေလည်း စာပြန်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စာမပြန်ချင်ရင်လည်း Notification Bar ကနေ Mark as read ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ရေးသားထားတဲ့ Messages များကိုလည်း Reply လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ သူက Contact တစ်ခုချင်းစီအတွက် Notification တစ်ခုစီကိုလည်း ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။
License Agreement မှာ Accept လုပ်ပေးပါ။ နောက်အဆင့်မှာ အောက်ခြေမှ Please Activate quickReply ကို နှိပ်ပါ။ Phone Settings ထဲမှာ Activate လုပ်ပေးပါ။ နောက်အဆင့်မှာ Lets Start ကို နှိပ်ပါ။
Home Screen ရောက်ရင် Features ကို နှိပ်ပါ။
ChatHeads notification နဲ့ Floating ChatHeads အောက်မှ ခလုတ်များကို On ပေးပါ။ Change settings of the floating ChatHeads ထဲမှာ Chat Head ရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ Transparency ကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် quickReply ကို Set Up လုပ်ပြီးပါပြီ။ သင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က Facebook Messenger ကနေ သင့်ထံ စာပို့ရင် အောက်က ပုံမှာလို Floating Chat Head နဲ့ ပြပေးမှာပါ။ အပေါ်က Chat Head က Facebook Messenger က ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က Chat Head က quickReply ကပါ။
အောက်က Chat Head ကို တစ်ချက်နှိပ်ရင် စာပြန်ဖို့ Box ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာရိုက်ပြီးရင် Send Button ကို နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်နည်းက Notification Bar ကိုဆွဲချပါ။ Chat Head Icon ကို တစ်ချက်နှိပ်ရင် Pop Up Window ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ စာရိုက်ပြီး လျှင်မြန်စွာ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
Facebook Messenger မှာ Chat Head ကို နဂိုကတည်းက ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အတွက် quickReply က သိပ်ပြီး အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Chat Head ကို မထောက်ပံ့တဲ့ Google Hangouts , Skype, WhatsApp , Line နဲ့ အခြား Messenger များအတွက်တော့ quickReply က အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ Messengers များကို ဖွင့်စရာမလိုဘဲ ၀င်လာတဲ့ Messages များကို လျှင်မြန်စွာ စာပြန်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 2.3MB ရှိပြီး Android 5.0 နဲ့ သူ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Facebook Messenger ရဲ့ Chat Head ကို အခွား Messenger မြားမှာ ဘယျလို သုံးမလဲ?
Google Hangouts , WhatsApp, Skype တို့ အပါအဝငျ Messenger မြားထံ Message မြား ဝငျလာတဲ့ အခါမှာ အဲဒီ Messenger ကိုဖှငျ့ပွီးမှ စာပွနျရတာ အလုပျရှုပျပါတယျ။ Facebook Messenger ရဲ့ Chat Head ကတော့ လကျရှိသုံးနတေဲ့ App ကို ပိတျစရာ မလိုဘဲ စာပွနျနိုငျတဲ့အတှကျ အလှနျအသုံးဝငျပါတယျ။ quickReply အမညျရ App က Messenger မြားကို ဖှငျ့စရာမလိုဘဲ စာပွနျနိုငျအောငျ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ quickReply က နာမညျကွီး Messenger မြားအပါအဝငျ Line, Kik, Textra, Telegram စတဲ့ နာမညျသိပျမကွီးတဲ့ Messenger မြားကိုလညျး အထောကျအပံ့ပေးပါတယျ။ သူက Messenger Chathead လို Pop-Up Window ကနေ စာပွနျနိုငျအောငျ လုပျပေးနိုငျသလို Notification Bar ကနလေညျး စာပွနျနိုငျအောငျ ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ စာမပွနျခငျြရငျလညျး Notification Bar ကနေ Mark as read ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ကွိုတငျရေးသားထားတဲ့ Messages မြားကိုလညျး Reply လုပျနိုငျပါသေးတယျ။ သူက Contact တဈခုခငျြးစီအတှကျ Notification တဈခုစီကိုလညျး ပွသပေးနိုငျပါတယျ။
License Agreement မှာ Accept လုပျပေးပါ။ နောကျအဆငျ့မှာ အောကျခွမှေ Please Activate quickReply ကို နှိပျပါ။ Phone Settings ထဲမှာ Activate လုပျပေးပါ။ နောကျအဆငျ့မှာ Lets Start ကို နှိပျပါ။
Home Screen ရောကျရငျ Features ကို နှိပျပါ။
ChatHeads notification နဲ့ Floating ChatHeads အောကျမှ ခလုတျမြားကို On ပေးပါ။ Change settings of the floating ChatHeads ထဲမှာ Chat Head ရဲ့ အရှယျအစားနဲ့ Transparency ကိုလညျး ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ quickReply ကို Set Up လုပျပွီးပါပွီ။ သငျ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျက Facebook Messenger ကနေ သငျ့ထံ စာပို့ရငျ အောကျက ပုံမှာလို Floating Chat Head နဲ့ ပွပေးမှာပါ။ အပျေါက Chat Head က Facebook Messenger က ဖွဈပါတယျ။ အောကျက Chat Head က quickReply ကပါ။
အောကျက Chat Head ကို တဈခကျြနှိပျရငျ စာပွနျဖို့ Box ပျေါလာမှာဖွဈပါတယျ။ စာရိုကျပွီးရငျ Send Button ကို နှိပျပါ။
နောကျတဈနညျးက Notification Bar ကိုဆှဲခပြါ။ Chat Head Icon ကို တဈခကျြနှိပျရငျ Pop Up Window ပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီကနေ စာရိုကျပွီး လြှငျမွနျစှာ ပေးပို့နိုငျပါတယျ။
Facebook Messenger မှာ Chat Head ကို နဂိုကတညျးက ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အတှကျ quickReply က သိပျပွီး အသုံးမဝငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Chat Head ကို မထောကျပံ့တဲ့ Google Hangouts , Skype, WhatsApp , Line နဲ့ အခွား Messenger မြားအတှကျတော့ quickReply က အသုံးဝငျပါတယျ။ အဲဒီ Messengers မြားကို ဖှငျ့စရာမလိုဘဲ ဝငျလာတဲ့ Messages မြားကို လြှငျမွနျစှာ စာပွနျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ဖိုငျအရှယျအစားမှာ 2.3MB ရှိပွီး Android 5.0 နဲ့ သူ့အထကျမှာ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။